Ultra Yakareba Range Zoom
Pro Yakareba Range Zoom
Yakajairika Range Zoom
Dhijitari Block Kamera Module
UAV / Drone zoom block kamera module
ne admin pane 21-08-12
Wona Sheen yakagadzira zoom block kamera kunyanya yeUAV kana drone. Ndeupi musiyano uripo pakati pedrone zoom kamera module uye zoom block kamera yeCCTV? 1. Kuti udzikise kunonoka kwevhidhiyo, 1080p UAV block kamera module yakagadzirirwa seyakajairwa 1080P @ 50fps / 60fps yakakwira furemu chiyero. Izvi ini ...
Kufananidza pakati pe optical zoom uye digital zoom
Mune zoom kamera module uye infrared thermal imaging kamera system, kune maviri zoom modes, optical zoom uye dijitom zoom. Idzi nzira mbiri dzinogona kubatsira kuwedzera zvinhu zviri kure kana uchiongorora. Optical zoom inoshandura iyo nzvimbo yekutarisa kona nekufambisa iro boka re lens mukati me lens, nepo zoom yedhijitari i ...
Mafomura uye matafura eiri kudziya kamera kamera module yekuona renji
Munguva refu yekuongorora kunyorera kwakadai sekudzivirirwa kwemahombekombe uye anti uav, tinowanzo sangana nematambudziko akadaro: kana isu tichida kuona makiromita makumi maviri vanhu uye mota, ndeipi mhando yekupisa yekufungidzira kamera inodiwa, bepa iri rinopa mhinduro. Mune infrared kamera system, iyo yekutarisa chikamu che ...
Iyo yekutarisa nzvimbo yerefu renji zoom kamera module
ne admin pane 21-05-09
Mune marefu marefu ekuongorora kunyorera kwakadai sekudzivirirwa kwemahombekombe kana anti UAV, tinowanzosangana nematambudziko akadaro: kana tichida kuona maUAV, vanhu, mota uye ngarava pa3 km, 10 km kana 20 km, rudzii rwehurefu hwekusimbisa kamera module inofanirwa tinoshandisa? Iri bepa rinopa mhinduro. Tora rep ...
Wona Sheen Yakaburitswa Ultra Yakareba Range Zoom Kamera Module
Wona Sheen Technology yakaburitsa 3 Ultra refu renje zoom block kamera: 2Megapixel 86x 860mm yakareba renji zoom kamera module, 4Megapixel 88x 920mm yakareba renji kamera module uye 2Megapixel 80x 1200mm yakareba renji zoom kamera module. Kupesana neyakajairwa mota yeCCTV yakareba renji + IPC mhinduro ...
Kushandiswa kwe3-axis kudzikamisa gimbal kamera muUAV mugwagwa mukuru kuongorora
Pachivanhu, kuongorora mugwagwa mukuru kunoenderana neIPC, ITC, Dome nemimwe michina kuti uwane chaiyo-nguva yekutarisa mota. Mhinduro idzi dzave dzichishandiswa kwemakore mazhinji uye dzakakura zvakanyanya. Nekudaro, pamwe nekuvandudzwa kwenzvimbo nyowani yeruzivo yemugwagwa mukuru, izvo zvikanganiso ...
Iko mukana wekureba zoom renji block kamera
Munzira yekureba yekutarisa, iyo yechinyakare nzira ndeye kushandisa mota yecctv lens yakadai seFijifilm neIPC. Mumakore maviri apfuura, nekushandiswa kweiyo yakareba yakatarisa kureba kamera kamera, musika we300mm ~ 500mm unomedzwa zvishoma nezvishoma neiyo kamera kamera, iyo ine hunhu o ...
Nhanganyaya Kugadzikana kwemajitari ekuita makamera akura, asi kwete muCCTV kamera lens. Pane nzira mbiri dzakasiyana dzekudzora iyo shaky-cam mhedzisiro. Optical mufananidzo kudzikamisa shandisa dzakaomarara Hardware michina mukati me lens kuti uchengetedze iwo mufananidzo wakadzikama uye kugonesa unopinza kubata. Zviri ...
NDAA inoenderana zoom block kamera
Wona Sheen anogona kupa NDAA inoenderana zoom block kamera. Nhanganyaya Tarisa Sheen Mstar zoom block makamera ari 100% NDAA inoenderana. Kana iwe wakambonzwa nezveUSA rondedzero yezvigadzirwa zvakaita seHikvision, Dahua naHuawei, saka ungangodaro wakambofunga kutarisa zoom block kamera isinga ...
Kushanda kwemagetsi uye optical defog mu cctv yakareba renje zoom lens
Kune maviri marudzi e defog tekinoroji. Optical defog Kazhinji, 770 ~ 390nm mwenje unooneka haugone kupfuura nemhute. Iyi nheyo inoshandiswa i ...
Makomborero e4 megapixel zoom block kamera module
Iyo block zoom kamera module yakanyatso kuyambuka kupinda mu4MP nyeredzi mwaka. Kana vanhu vachitaura nyeredzi yekuvharira makamera, ivo vanowanzo funga nezvekuita kwe2MP nyeredzi yekuvharira kamera. Asi nekusimudzirwa uye kufarirwa kweAI kunyorera, izvo zvikanganiso zve2MP nyeredzi nyeredzi makamera ari becomi ...
Wona Sheen Technology Yakabatanidzwa muDubai Exhibition
ne admin pane 20-01-22
Iine zoom yayo block kamera, drone payloads, bi spectrum PTZ kamera, yakareba PTZ kamera, dzimba uye zvimwe zvigadzirwa, View Sheen Technology yakapinda muchiratidziro chakaitirwa muDubai. Wona Sheen ine yakakwana kwazvo chigadzirwa mutsara we zoom block kamera, iyo inovhara network uye dijitari lvds cam ...